ဝန်ကြီးဌာန အဂတိလိုက်စားမှုများ ပြည်သူ့လွှတ်တော် စစ်ဆေးတွေ့ရှိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ၀န်ကြီးဌာန အဂတိလိုက်စားမှုများ ပြည်သူ့လွှတ်တော် စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
၀န်ကြီးဌာန အဂတိလိုက်စားမှုများ ပြည်သူ့လွှတ်တော် စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Mar 10, 2012 in Myanma News, News | 20 comments
ခြစားမှု လွှတ်တော်မှ စစ်ဆေးမည်
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ၀န်ကြီးဌာနတွေက ကျပ်သိန်းပေါင်း ထောင်ချီပြီး ငွေကြေး အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေနဲ့ ငွေစာရင်း မမှန်မကန်ဖော်ပြမှုတွေကို ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားကြောင်း မတ်လ ၈ ရက်ထုတ် The Voice Weekly သတင်း ဂျာနယ်က ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ငွေစာရင်းကော်မတီကို ပေးပို့တဲ့ အစီအရင်ခံစာမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာဆည်မြောင်းနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ် ၁ နဲ့ ၂ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနများရဲ့ ငွေကြေး အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေနဲ့ ငွေစာရင်း မမှန်မကန်ဖော်ပြမှုတွေအကြောင်း ပါဝင်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းစာ ရောင်းရငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂ ထောင့် ၅ ရာကျော် ငွေစာရင်း မသွင်းဘဲ အလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့တာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပြီး ကျပ်သိန်း ၁ ထောင့် ၅ ရာကျော်သာ ပြန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အမှတ် ၁ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေမှာ မီးထိုးဆီ ဂါလံ ၂ သိန်းကို ချောက်ရေနံချက်စက်ရုံက ထုတ်ယူပြီး ပြင်ပလက်လွှဲရောင်းချခြင်း၊ မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်း အစုရှယ်ယာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ နဲ့ ဦးပိုင်လီမိတက်ကို ရောင်းချရာမှာ ဦးပိုင်လိမိတက် ကုမ္ပဏီကပေးရမယ့်အစား နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပေးခဲ့ခြင်းတွေ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ငွေစာရင်းကော်မတီက သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို တင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ လွှတ်တော် ငွေစာရင်းကော်မတီဝင် တစ်ဦးက ပြောကြားတယ်လို့လည်း သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia.
custom တို့ ဆက်သွယ်ရေးတို့ စီမံစီးပွားတို့ က စားရင်းကိုင်တွေကတော့
စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံက စစ်တဲ့လူတွေ ဘာမှ မတွေခဲ့လို့ အစီရင်ခံစာထဲမပါတာလား
ဘယ်သူ့မှ ပြန်မပြောနဲ့ ဒါဟာလျှို့ဝှက်ချက်
ပုပ်တော့လဲ ပေါ်ပီပေါ့ အပုပ်တွေ ကို မြေမြှုပ် ပြစ်ကြဇမ်းဘာ
တကယ်စစ်မယ်ဆိုရင် ကောင်းပါလေ့ကြည့်ကောင်းလိုက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်းဗျား ။
ှုဥုံ……. ပျောက်စေ…. ပျောက်စေ…. ပျောက်စေ…
( ကျော်ဆန်း….မန်းသံ )
မကြာမီ ကြားရမည့် သတင်းထူးများ
နိုင်ငံတကာရှိ အထူးကုဆေးတိုက်ကြီးများတွင် မြန်မာအရာရှိကြီးအများအပြား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးကြသဖြင့် ဆေးတိုက်ကြီးများ အလုပ်ဖြစ်လျက်ရှိ
ကျန်းမာရေးကြောင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာဆည်မြောင်းနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ် ၁ နဲ့ ၂ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနများမှ အရာရှိကြီးတချို့ အနားယူသွား
.. မင်းလည်းသိတယ်.. ငါလည်းသိ.. အာ..ဟာ..
ဘာမှ ငါတို့ လုပ်လည်းမရ….
အလိမ်တွေ ပေါ်အောင်စစ်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးကြပါဗျို့
အထူးသဖြင့် ဂျပုနဲ့ ကမ္ဘာကျော်လူလိမ်ကြီးရဲ့ စာရင်းတွေကိုသေချာစစ်ကြပါ။
ဘာသာစကားပါကွယ်.. .. တူ့နယ် တဲ့နယ် .. ..။
အားလုံး သူခိုးတွေချည်းဘဲ။သမတဂျီးတောင် မလွတ်ဘူး။
ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီးနှစ်ဦးရဲ့ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီစာရင်းများ ကွဲလွဲနေကြောင်း
voice ဂျာနယ်ကို တပ်မတော်သား(ငြိမ်း) တစ်ဦးကစားရေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ
န၀တ ရဲ့ (၁၀၂)ကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာက
၃၁-၃-၈၈ နေ့ထိရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီက ၅.၈၇၈ ဘီလီယံ မှာ မသုံးရသေးတာ ၁.၆၉၃ ဘီလီယံ နဲ့ သုံးပြီးကြွေးမြီ ၄.၁၈၅ ဘီလီယံ(သန်းပေါင်း ၄၂၀၀ ကျော်) ရှိကြောင်း၊ ၁၉၈၉ မတ်လမှာ မသုံးရသေးတဲ့ကြွေးမြီ ၁.၄၄၆ ဘီလီယံ နဲ့ သုံးပြီး ၄.၂၃၃ ဘီလီယံ- ပေါင်း ၅.၆၇၉ ဘီလီယံ၊
၁၉၉၀ မတ်လမှာ မသုံးရသေးတာ ၁.၁၃၃ဘီလီယံ နဲ့ သုံးပြီး ၄.၁၀၅ ဘီလီယံ- ပေါင်း ၅.၂၃၈ ဘီလီယံ သာရှိကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါသတဲ့
ထို့အပြင် ၅-၁၀-၉၀ ရက်နေ့ (၁၀၅) ကြိမ်မြောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ယခင်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်အေဘယ်က နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ ၄.၂ ဘီလီယံ (၄၂၀၀ သန်း) သာရှိကြောင်းတင်ပြထားပါသတဲ့
၃၁-၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့ လွှတ်တော်မှာ လက်ရှိ ဘဏ္ဍာအခွန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း ဖတ်ကြားတင်ပြသွားတာက ၁၉၈၈ မတိုင်မီချေးငွေ ၈၄၀၈.၃၄၈ သန်း ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း
ချေးငွေ ၂၆၁၄.၉၅ သန်း၊ စုစုပေါင်း ကြွေးမြီ ၁၁၀၂၃.၂၉၈ သန်း ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ယခုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလှထွန်း ရဲ့ အကြွေးစာရင်းဟာ ဗိုလ်မှူးချုပ်အေဘယ် ပြောတာထက် နှစ်ဆတောင်ဖြစ်နေပါတယ်…။
ဗိုလ်မှူးချုပ်အေဘယ်လည်း သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတာမို့ ရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်တဲ့ဗျား..။
အချင်းချင်း စားခွက်လုရင်း ဝေစုမတည့်လို့ အခုမှ ဖော်တာလား …. ၊ တကယ့်ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ချင်လို့ ဖော်လိုက်သလား … ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် …. ဒီလို မသမာမှုဖော်ထုတ်တဲ့ သတင်းမျိုး များများကြားချင်တယ်ဗျို့ …. ဘရာကြော်ပါ ရွာစားရေ
ဒီလိုဒီလို ခိုးတယ်ဆိုတာ အခုမှသူတို့ သိတာလား…ကျွတ်..ကျွတ်…ကျွတ်….
ခိုးရုံတင် မကတော့ဘူး ဦးပွရေ
ခုတော့ အရင်ကြွေးစာရင်းကိုပါ နှစ်ဆတိုးပြနေတာဗျ